Plasma 5.2 misy, ndao jerena izay vaovao [Nohavaozina] | Avy amin'ny Linux
Misy ny Plasma 5.2, ndao hojerentsika izay vaovao [Nohavaozina]
Ya ao amin'ny vanim-potoana vaovao an'ny KDE SC isika. Navoaka tamin'ny alàlan'ny fampiasa vaovao sy fanamboarana bibikely maro ny Plasma 5.2, izay horesahintsika eto ambany.
1 Ny singa vaovao amin'ny Plasma 5.2
2 Efa an-dàlana ny tetezamita
3 Fametrahana manual 5.2 Plasma
Ny singa vaovao amin'ny Plasma 5.2
Ity kinovan'ny Plasma ity dia miaraka amina singa vaovao hanamboarana ny KDE ho birao feno kokoa:
Bluedevil: hahafahantsika mitantana fitaovana Bluetooth. Azontsika atao ny manamboatra ny totozy, ny kitendry ary mandefa / mandray rakitra, ho fanampin'ny fitetezana ireo fitaovana mifanaraka amin'ity haitao ity.
KSSHAskPass: Raha miditra amin'ny solosaina hafa amin'ny alàlan'ny ssh isika, ary araka ny tokony ho lojika dia manana teny miafina ny mpampiasa, ity modely ity dia hanome antsika mpamatsy mpampiasa sary hiditra ny teny miafina.
Muon: Amin'ny alàlan'ity fitaovana ity (efa fantatry ny maro) dia hahafahantsika mametraka, mitantana rindrambaiko sy add-on hafa ho an'ny solosainao.
Fanamboarana ho an'ny SDDM: SDDM izao no mpitantana fidirana safidy ho an'ny Plasma, manolo ny KDM taloha, ary ity modely System Configuration vaovao ity dia ahafahanao manamboatra ny lohahevitra.
KScreen: io no maodelim-panamafisana ny rafitra hametrahana ny fanohanana ho an'ny mpanara-maso marobe (jereo ny sary manaraka).
Style ho an'ny fampiharana GTK: ity modely vaovao ity dia ahafahanao manamboatra ireo lohahevitra momba ny fampiharana Gnome.
KDecoration- Ity tranomboky vaovao ity dia manamora ny fananganana lohahevitra ho an'ny KWin azo antoka kokoa. Izy io dia manana fahatsiarovana mahomby, fanatanterahana ary fanatsarana ny fitoniana. Raha tsy manana endri-javatra ianao dia aza manahy fa hiverina ao amin'ny Plasma 5.3 io.
Ho fanampin'izany, ankehitriny isika dia afaka manafoana ny hetsika fanesorana Widget amin'ny Plasma:
KRunner ankehitriny dia matanjaka sy voarindra kokoa izy io raha ny fampisehoana ny fampahalalana ilaintsika, ary mamela antsika hifehy ilay mpilalao mozika mihitsy aza. Ary koa, izy io izao dia natomboka tamin'ny alàlan'ny fitambarana fanalahidy Alt + toerana.
KWin Izy io dia efa miaraka amin'ny lohahevitra vaovao izay efa hitantsika tamin'ny alàlan'ny default ary manana andiana kursor sy sary masina vaovao antsoina isika Breeze (Brisa), na dia araka ny hevitro aza dia mbola tsy ampy (ireo sary masina) fampiharana marobe hanohanana.
Ho an'ny ambiny, manana Widget vaovao ho an'ny birao izahay, ny menio fampiharana hafa (Kicker) azonao atao ny mametraka ny rindranasa ao anaty menio mihitsy ary mampiditra asa fanovana. Baloo mahazo fanatsarana ianao ary mandany CPU kely kokoa amin'ny fanombohana. Manana fitaovana vaovao ny mpanadihady fangatahana, ohatra, manoratra "type: Audio" amin'ny Krunner ary manivana ny valim-peo.
Ao amin'ny efijery lamba, nohatsaraina ny fampidirana amin'ny logind mba hikatona tsara ny efijery alohan'ny hampiatoana azy. Azo apetraka ny sary ambadika. Ao anatiny dia mampiasa ampahany amin'ny protokol Wayland, izay ny hoavin'ny birao Linux.
Misy ny fanatsarana amin'ny fikirakirana fanaraha-maso marobe. Ny kaody detection ho an'ny mpanara-maso marobe dia azo nalefa hampiasa ny extension XRandR mivantana ary hadisoana maro mifandraika no namboarina. Ireo sy ny fanatsarana hafa dia azo jerena ao amin'ny Avoahana naoty.
Efa an-dàlana ny tetezamita
Farafaharatsiny ao amin'ny ArchLinux dia efa manana fonosana vitsivitsy izay mameno tsara ny KDE 4.14 taloha isika. Kate, Konsole, dia ohatra roa amin'izany. Na dia ho an'ny KDE4 aza dia tazonina ao anaty ny toeran'ny mpampiasa ~ / .kde4 /, ho an'ny rindranasa vaovao no hamonjeny ~ / .config / tahaka ny Arch Wiki.
Amin'izao fotoana izao dia tsy azoko antoka raha azo apetraka tanteraka ao amin'ny ArchLinux ny Plasma 5.2, na dia mino aza aho fa afaka. Aorian'izay izahay dia hampahafantatra anao momba izany sy ny fomba hanaovana izany raha azo atao.
Fametrahana manual 5.2 Plasma
Vao nametraka fametrahana an-tanana avy any Antergos aho (tsy misy tontolon'ny sary) ary amin'ny ankapobeny dia io no mila apetraka mba hiasa bebe kokoa na kely kokoa ny zava-drehetra:
Mbola tsy mandeha ihany anefa i KMix. Toy izao ny endriny:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Misy ny Plasma 5.2, ndao hojerentsika izay vaovao [Nohavaozina]
idecasso dia hoy izy:
Niezaka ny hampiasa ireo kinova teo aloha aho tao amin'ny Archlinux, saingy nanana olana maro na tsy fitoviana aho, antenaiko fa tsy ho ela dia azo atao ny mampiasa ny KDE Plasma amin'ny famokarana.
Mamaly an'i idecasso
Nametraka azy io fotsiny aho tamin'ny alàlan'ny Antergos ho fototra ary indrisy mbola miankina amin'ny zavatra maro avy amin'ny KDE 4.14, toy ny Dolphin. Mbola tsy ampy ..
Hiandry an'ity Kde 5 matotra kokoa aho izao dia mandeha tsara ny Kaos amin'ny kde 4.14.4
Dago dia hoy izy:
Eny, i Anke dia manisa ny fandehanana any amin'ny kf5 amin'ny faran'ny volana febroary, hitandrina ny kf5 sy ny plasma 5 fotsiny, dia hijanona ny fitazonana ny kde 4.
Mamaly an'i Dago
Vaovao tsara rahateo ...
Malahelo ny ArchLinux aho amin'ireo zavatra toa an'ity. Fa mandritra izany fotoana izany tiako ny KDE ao amin'ny Fedora.
Ary tsara raha manao izany ianao.
Ary tsara raha manao izany ianao. Azonao atao koa ny mametraka Plasma 5 amin'ny Fedora.
Khirah dia hoy izy:
Eny, tsy dia fantatro loatra izay mitranga amin'ireo rindran-damosiko. Mampiasa ny menio manerantany aho ary efa very ny kwrite, kate ary konsole. Dia tsapako ny antony. Ankehitriny, misy zavatra nahasarika ny saiko ary ny fanambarana nataon'i Andrea Scarpino https://www.archlinux.org/news/transition-of-kde-software-to-the-kde-framework-and-qt-5/ izay amporisihany hanova ny kinova Plasma 5.2.
Tena mety ve ny mifamadika amin'ny Plasma 5.2? Raha eny dia inona no fomba marina hanaovana azy? sa aleo manao fametrahana madio?
Mialoha ny misaotra anao.
Valiny amin'i Khirah
scorponox dia hoy izy:
Manana fisalasalana roa aho ... andao hojerena raha mahafantatra zavatra ...
Hapetraka irery ve ny KWin irery?
Inona no hitranga amin'i Dolphin ary hisy mpisolo toerana ve?
Azo apetraka ve ny Plasma raha tsy misy Badoo?
Valiny amin'ny escorponox
Eny, tsy mbola fantatro tsara. Zahao ny hevitro etsy ambony .. 🙁
Toa tsara! Misaotra tamin'ny fampahalalana… Slds!
Ny KDE dia lasa tena tsara tokoa ankehitriny
Fernando Gonzalez placeholder image dia hoy izy:
Fijery tena tsara, mihatsara isan'andro ny KDE. ary ny fampiasa tsy lazaina intsony, tena tsara, antenaina fa ny hevitry ny microsoft sy ny paoma dia tsy mangalatra ny hevitr'izy ireo amin'ny kde.
Valiny tamin'i Fernando Gonzalez
Ny fisehoseho tsara tarehy KDE tsara indrindra hitako.
Tsy haiko amin'ny ambaratongan'ny fampiasa ... fa nahasarika ny saiko fa tsara be izany amin'ny alàlan'ny default, avy any mandriva dia tsy nahita zavatra nitandrina be aho
Hiandry ny kinova azo antoka an'ny kde 5 aho
kde4 no birao maharitra indrindra nampiasako fa tsy hanova azy aho izao
Ho an'ireo mampiasa Plasma 5, ahoana ny fanjifana ondrilahy raha ampitahaina amin'ny KDE 4.14?
Jai dia hoy izy:
Nilaza izy ireo fa nilatsaka be ny fanjifana. Notsapaiko nandritra ny herinandro (ilay teo aloha, 5.1), ary tsikaritro fa tsara ny valiny, nanome ny fiheverana fa be ranoka kokoa noho ny KDE4 izy io. Mazava ho azy fa nanana chrashes kwin sy plasma marobe aho, ary tsara, satria manana ny solo-sainako hiasa miaraka amiko aho, indray mandeha dia nanao ny tsara aho ary niverina tany amin'ny KDE4. Hiverina hitsapa ny 5.2 aho mba hahitako ny fomba fiasa. Fa hitako fa mbola tsy ampy kely io mba hahamarin-toetra toa an'i KDE4.
MPAMITAKA dia hoy izy:
Tsy maintsy ekena fa raha ampitahaina amin'ny KDE 4.14, ny plasma 5 dia mandany fitadidiana RAM bebe kokoa.
Mandany ahy manodidina ny 10% amin'ny 4GB, ka mandany RAM be dia be. Fa na eo aza izany dia mandeha tsara ny Arch.
PS: Elav miaraka amin'ilay baiko Heveriko fa navelanao ny «plasma» fonosana, izay misy fonosana hafa manan-danja ihany koa. Farafaharatsiny omaly raha nametraka azy aho dia ny nataoko dia:
Valiny amin'ny Mpamitaka
… Izany ve no tena matotra kde 4.14…. Hampiasaiko hatramin'ny 2018 farafaharatsiny. Mandeha mihodina!
osky027 dia hoy izy:
Nametraka fametrahana madio ny 15.04 aho, ary nanana olana tamin'ny sary tamin'ny karatra NVIDIA GS7300, vita ny fametrahana ary nanjary black screen. Tsy maintsy namerina nametraka ilay 14.10 aho.
Mamaly an'i osky027
Ireo fisehoan-javatra vaovao izay manandanja indrindra amin'ny mpampiasa maro dia tsy eto, fa aza manahy fa napetrako izy ireo.
- 150 MB ny fanjifana RAM LESS (ny olona mihinana bebe kokoa dia noho izy ireo mamoaka tranomboky KDE4, jereo)
- Mitombo ny hafainganam-pandeha amin'ny fampiharana haingana rehetra. Masiaka ny vokany any Chrome; Mandeha 20 ka hatramin'ny 30% haingana kokoa izy, amin'ny lafiny ara-pitondrantena.
Imbetsaka aho no nanandrana azy io ary mbola tsy afaka mahazo kisary marobe ao anaty lovia akory aho na dia manao izay lazain'izy ireo ao amin'ny forum aza. Mitranga aminao izany, napetrako teo aloha izy io ary tsy mahavonjy ny fikirakirana azy akory.
Mitranga amin'ny olona iray ve izany?
Mamaly an'i fran
Iza amin'ireo no tsy mivoaka?
Ohatra vitsivitsy, mega, bcloud, cloud mail ru ohatra.
Ary tsy voatahiry ny fikirakirana, raha mivoaka aho ary miditra dia toy ny nametraka azy io indray aho. Fitaovana vaovao sy madio izy io.
Raha mampiasa antergos amin'ny milina virtoaly aho dia mahazo ao anaty lovia ny sary masina, apetraho izay apetrakao, na inona na inona.
Nisy zavatra nitovizany tamiko omaly. Ny nataoko dia mamafa ny fisie fikirakirana rehetra avy ao amin'ny / tranoko. Namerina namaky aho ary voila, mandeha ny fanovana. Tsy mbola nanandrana ireo noteneninao aho, fa farafaharatsiny ilay MEGA raha azoko. Avelako ianao hisambotra. https://plus.google.com/118419653942662184045/posts/cfPeo35HQ4j
Rehefa mamaha ny olana amin'ny karatra NVIDIA GS7300 aho dia tsy mamaly ny Plasma 5, miaraka amin'ny fametrahana madio 15.04, dia mijanona ho efijery mainty.
Nametraka kubuntu 15.04 tamin'ny Plasma 5.3 aho ary tao anatin'ny herinandro nampiasako azy dia nahatratra ahy indroa izany. Nahamarika olana vitsivitsy aho rehefa niara-niasa tamina apks nisokatra marobe, libreofice + amarok + Firefox dia nifarana tamin'ny famoahana sy fanamaivanana ny fiovana teo am-baravarankely.
Roa monja no nakatona tamiko ilay mpanamboatra rindrambaiko.
Ary nanipy hadisoana hadalana tamiko ilay karazana navoaka talohan'ny kinova beta an'ny Ubuntu.
Etsy ankilany, maimbo tsy mifanaraka amin'ny Firefox aho, satria nisy olana maro tamiko.
Indraindray aho mahatsapa fa rava ny rafiko amin'ny fotoana rehetra hahaha.
Azoko atao ve ny mametraka Plasma 5 amin'ny Lubuntu?